पर्यटन बोर्डका नवनियुक्त सीईओ डा. रेग्मीद्वारा पदबहाली - Shikhar Post Shikhar Post
पर्यटन बोर्डका नवनियुक्त सीईओ डा. रेग्मीद्वारा पदबहाली
काठमाडौं– नेपाल पर्यटन बोर्डका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा धनञ्जय रेग्मीले पदबहाली गरेका छन् । बोर्ड सचिवालयमा आज सिईओ रेग्मीले जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् ।
जलवायु परिवर्तनमा विद्यावारिधि गरेका रेग्मी हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत भूगोल तथा वातावरण केन्द्रीय विभागमा सहायक प्राध्यापक र नेपाल भूगोल समाजका अध्यक्ष हुन् ।उनी हिमालयन रिसर्च एक्सपिडिसन र हिमालयन अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष पनि हुन् ।
प्रकाशित मिति : बिहीबार, १६ माघ २०७६ २३:३४